नेपाल दक्षिण एसियाको ‘पोलिटिकल बफर जोन’ बन्दै – Etajakhabar
अधिवक्ता सुजित के.सी दक्षिण एसियामा नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, जसको उत्तरी छिमेकी महाशक्ति राष्ट्र चीन छ भने दक्षिणी छिमेकी उदाउदो शक्ति राष्ट्र ईन्डिया छ । यि दुई मुलुक छिमेकी हुनु नेपालको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । कुटनितिक रुपमा शक्ति सन्तुलन गर्न सकिए नेपालको अस्तित्व यिनै मुलुकले जोगाउन बाध्य समेत हुने थिए । नेपालको अवस्थाले सधै यिनलाई आफ्नो सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्ने सक्नेमा चिन्ता समेत नभएको हैन ।
दक्षिणी छिमेकी ईन्डियाले नेपालको सिमा अतिक्रमणदेखि राजनितिमा प्रत्येक्ष हस्तक्षेप गर्दैआएको छ । अमेरिकाको साथ र सहयोगमा ईन्डियाले नेपालको भूमि प्रयोग गरि फ्री तिब्बतको खाम्पा विद्रोह समेत गराएको थियो । उक्त विद्रोहलाई राजा विरेन्द्रकै पालामा नेपाली सेनाले परास्त गरि दियो । नेपालको भूमि फेरि पनि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाका कारण राजा विरेन्द्रले नेपाललाई शान्ती क्षेत्र बनाउने अभियान नै चलाएका थिए तर दक्षिणी छिमेकी ईन्डियाले नै यो अभियानको विरुद्धमा थियो । त्यसै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषण गर्ने अभियान नै असफल भयो । दुखको कुरा जसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन चाँहे उनैको निर्ममता पूर्वक हत्या भयो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले समेत विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न नखोजका हैनन् तर उनी पनि असफल भए, सत्ताचुत गराइयो । भारतले सात दललाई दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गराई नेपालमा जनआन्दोलन गरायो । भारतकै दबाबमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाईयो । यत्रो ठूलो परिवर्तन गर्दा एक पटक पनि जनमत बुझिएन् । जनमत संग्रह बिना नै नेपाललाई गणतन्त्र धर्म निरिपेक्षता र संघीयतामा लगियो । अहिले नेपालको राजनितिक वृत्तमा देखिएको घटनाक्रमलाई हेर्दा सोच्नै नसकिने घटना परिघटना भईरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने आउँदो निर्वाचनमा एमाले बिना गठबन्धन नै पहिलो राजनितिक शक्ति हुने संभावनाको विश्लेषण धेरैले गरेका थिए ।
तर पनि अनपेक्षित रुपमा एमालेको माओवादी र नयाँ शक्तिबीच गठबन्धन बन्न पुग्यो । माओवादीबीचको गठबन्धन भन्दा नि तुलनात्मक रुपमा नयाँ शक्तिसँगको गठबन्धनले शंका र भ्रम दुवै उत्पन्न गराएको छ । भारत निकट नेता मानिएका पूर्व प्र.म डा.बाबुराम भट्टराई किन र कसरी बाम गठबन्धनमा आए सबैलाई आश्चर्य लागेको छ । कम्युनिजम नै छोडेका र अन्य दललाई पुरानो शक्ति भनि नयाँ शक्ति स्थापना गराएका भट्टराई एकाएक बाम गठबन्धनमा आउनुले शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक नै हो ।
स्थानीय निर्वाचनमा झण्डै पत्तासाफ नै भएको नयाँ शक्ति पार्टी अस्थित्वकै कारण एमाले र माओवादीसँग गठबन्धन गर्न पुगेका बुझ्न सकिन्छ । तर माओवादी र एमाले दुवैले बाबुरामको अपेक्षा बमोजिमको सिट नदिने पक्का छ । त्यस्तै माओवादीलाई पनि बिना गठबन्धन निर्वाचन परिणाम नराम्रो आउने कारणले नै गठबन्धन गर्न बाध्य भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्को तर्फ ४ महिना अघिको स्थानीय निर्वाचनसम्म एक अर्कालाई वर्ग शत्रु मान्ने यि दुई राजनितिक शक्ति आफै भन्दा पनि विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभावमा मिलेका हुन सक्ने अनुमान थुप्रै राजनितिक विश्लेषक समेतले गर्दैछन् । विदेशी शक्तिको प्रभाव बिना यि मिल्ने सम्भावना नै थिएन ।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँगको तालमेलका कारण अपेक्षा अनुरुप परिणाम ल्याएको माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने पक्षमा नै देखिन्छ । कांग्रेस माओवादी तालमेलले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डको छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन अनेक हतकण्डा समेत गरेका थिए । त्यसको ४ महिना पनि नबित्दै माओवादी एकाएक एमालेसँग मिल्नु राजनितिक चमत्कारी नै हो ।
अमेरिका चीनलाई घेर्ने नितिमा छ र नेपाललाई पनि एउटा पोइन्ट खोजिरहेको छ । त्यसै कारण पनि अमेरिकाले नेपाललाई ५१ अर्बको आर्थिक सहयोग गरेको हो । त्यस्तै चीन पनि नेपालको भूमि आफ्नो एक चीन निति विरुद्ध प्रयोग नहोस् भनि प्रतिरक्षात्म अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा त्यहि कारण चीनले आफ्नो प्रभावलाई पनि बढाउदै छ । साथै चीन दक्षिण एसियामा भारतलाई घेर्ने रणनितिमा छ । यस कारण नेपालको भूमि चीन र भारत दुवै विरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको कुनै ठोस परराष्ट्र निति नै छैन् । नेपालले कुटनितिक सम्बन्धबाट यि दुई छिमेकी मुलुकलाई सन्तुलित रुपमा समदुरीमा राखी सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एक मुलुकको मात्र प्रभावले अर्को मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्दछ भने नेपालकै अस्तित्वमा समेत खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । त्यस्तै पश्चिमा मुलुकहरुको हस्तक्षेप पनि नेपालमा बढ्दो छ । नेपालमा भएको धर्म निरिपेक्षताको परिवर्तन यिनले गराएको बुझ्न सकिन्छ । गरिब तथा अशिक्षित नेपाली जनतालाई गाऊँ गाऊँमा अहिले लोभ प्रलोभनमा पारि धर्म परिवर्तन गराईदैछ ।
धर्म प्रचार गर्न विदेशबाट समेत नेपाल आउने गरेको तथ्य सबैमा प्रष्ट नै छ । त्यसै गरी विदेशीबाट प्रायोजित अधिकांश एनजिओ तथा आइएनजिओले त धर्म संस्कृतिमा समेत प्रहार गरिरहेका छन् । यूनेस्को जस्ता संस्थाले त धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न विचार गोष्ठीहरु संचालन गर्दै, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाउदै धर्म र संस्कृतिको गलत व्याख्या समेत गराउदै हिडेको बुझिन्छ ।
यसरी हाल नेपालमा कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र छैन्, जहाँ विदेशी प्रभाव नभएको नहोस् । दिन प्रति दिनको बढ्दो विदेशी प्रभावले नेपाललाई दक्षिण एसियाको क्रिडा स्थल बनाउन सक्दछ । नेपाललाई अस्थिरता तर्फ लान सक्दछ । नेपालले ठोस परराष्ट्र निति बनाउनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न परियोजना र विकास निर्माणका नाममा भित्रिएका विदेशी लगानीलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एनजिओ तथा आइएनजिओ जस्ता संस्थाको गतिविधिलाई समेत निरिक्षण र आवश्यक परे नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपाल दक्षिण एसियाको ‘पोलिटिकल बफर जोन’ बन्नेछ र सधैंको लागि मुलुक द्वन्द ग्रस्त र अस्थिर बन्नेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २८, २०७४ समय: १३:२८:२८
मनोज पुन इनकाउन्टर नसेलाउँदैं इटहरीबाट अटोमेटिक पेस्तोल सहित दुई पक्राउ, को हुन पक्राउ पर्नेहरु ?
गोली हानेर अरुको ज्यान लिने मनोज पुन प्रहरीको गोलीबाटै सकिए, घटनास्थल तथा अस्पतालबाट एक्सक्ल्युसिभ तस्वीरसहित
शेरबहादुर देउवालाई आइपर्यो फेरी अर्को संकट, चितवन गएर महामन्त्री डा शशांकले दिए ठाडै यस्तो चेतावनी
महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म प्रचण्ड र केपीले संयुक्त नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि कसको पक्षमा पल्टिएला पासा ?
अबको सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि हुने भन्दै केपीका यि खास नेताले गरे अर्को महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता, भने ‘प्रचण्डजी पनि आइहाल्नुभो अब मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ’